Inaa Lilaahi wa Inaa Illaahi Raajicuun, Ganacsade Cabdulahi Axmed [Cabdullahi-Dheere] oo ku Dhintay Shil Baabuur Mombasa, Kenya – Rasaasa News
Inaa Lilaahi wa Inaa Illaahi Raajicuun, Ganacsade Cabdulahi Axmed [Cabdullahi-Dheere] oo ku Dhintay Shil Baabuur Mombasa, Kenya
Dec 19, 2010 Ganacsade Cabdulahi Axmed [Cabdullahi-Dheere] oo ku Dhintay Shil Baabuur Mombasa, Inaa Lilaahi wa Inaa Illaahi Raajicuun, Kenya
Waxaa shalay geeri naxdin leh oo uu sababay Shilbaabuur ku timid Cabdulahi Axmed [Cabdullahi-Dheer] oo ahaa ganacsade caan ah oo deganaa dalka Kenya, kana soo jeeday dhulka Somalida Ogadeeniya, gaar ahaana gabalka Fiiq.
Marxuun Cabdulahi Dheer, oo saaran gaadhi uu leeyey oo ay kula safrayeen sadex wiil oo uu dhalay magaalada Mombasa, ayaa waxaa si kadis ah uga horyimid baabuur weyn oo kuwa xamuulka qaada ah. Waxaana kolkiiba geeriyooday Cabdulahi Dheer iyo wiil uu dhalay, waxaa iyaguna dhaawac ah laba wiil oo uu dhalay.
Cabdulahi Dheer ayaa dhawaan waxaa uu booqasho ku tagay Itobiya, waxaana uu booqday magaalada uu ku dhashay ee Fiiq, waxaana uu aad uga naxay darxumada ay sababeen dagaaladu. Cabdulahi Dheere waxaa uu ka mid ahaa dadkii aadka ugu ololaynayey in ay nabadi ka dhalato gabalka Ogaden, waxaana uu ka qayb galay doodo adag oo ku saabsan maslaxada gabalka Ogaden.
Cabdulahi Dheer ayaa waxaa uu ku jiray hawlo guud oo dan u ah dadweynaha gabalka Ogaden, Cabdulahi waxaa uu ahaa Qaban qaabiyaha Shir lafilayo in uu dhawaan ka dhaco dalka Kenya, oo looga hadli doono danaha dadweynaha u dhashay gabalka Ogaden iyo sidii ay nabad waarta u heli lahaayeen.
Waxaan wali war laga haynin sidi uu u dhacay shilka sababay dhimashada Marxuun Cabdullahi Dheere, waxaana baadhid ku haya ciidanka nabad galiyada wadooyinka ee dalka Kenya. Waxaana la sugayaa in maalmahan soo socda uu war ka soo saaro ciidanka nabad galiyada wadooyinka ee dalka Kenya.
Bahda shabakada Rasaasa.com, iyaga oo aad uga tiiraanyeysan waxay tacsi u dirayaan qoyskii, qaraabadii, ehelkii iyo guud ahaanba ummada Somalida Ogadeeniya ee nabada jecel in uu Eebe weynuhu samir iyo iimaan ka siiyo labada marxuuna uu janadii geeyo, labada wiil ee dhaawaca ahna uu caafimaad siiyo.